I Sipra dia manome baiko ho takalon'aina amin'ny tarehy, mampiroborobo ny fitsapana COVID-19 any amin'ny seranam-piaramanidina
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Sipra » I Sipra dia manome baiko ho takalon'aina amin'ny tarehy, mampiroborobo ny fitsapana COVID-19 any amin'ny seranam-piaramanidina
Nanambara ny manampahefana any Sipra fa mahomby androany, ny saron-tava dia tsy maintsy atao amin'ny faritra anatiny be olona rehetra, toy ny toeram-pivarotana sy fivarotana lehibe.
Manomboka amin'ny zoma misasak'alina, izay tsy manao sarontava amin'ny toerana be olona toy ny hopitaly, banky ary fiangonana dia mandoa onitra 366 $
Hetsika vaovao nohamafisina Covid-19 tranga tamin'ny herinandro lasa izay dia nampisahotaka ny tompon'andraikitra eo an-toerana. Nilaza ny minisitry ny fahasalamana Constantinos Ioannou fa ny fihemoran'ny fameperana COVID-19, ampiarahana amin'ny taha ambany ny otrikaretina, dia nanjary “fahafaham-po tafahoatra” nataon'ny olona sasany.
Sipra koa dia manatsara ny fitsapana COVID-19 an-tsokosoko any amin'ireo seranam-piaramanidina roa lehibe. Ny fitiliana tsy ampoizina any amin'ny seranam-piaramanidina dia hitombo hatramin'ny 600 ka hatramin'ny 1,000 isan'andro, miaraka amin'ny fanamafisana ny fiverenan'ny Siprosy avy amin'ny fialantsasatra.
Ny isan'ireo mpandeha amin'ny fitateram-bahoaka indray dia tapaka hatramin'ny antsasaky ny fahaizan'ny fiara.
Ny hotely California Hilton sy Marriott dia mampiasa robot hanakanana ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny vahiny
Ny indostrian'ny fizahan-tany any Espana dia sahirana satria nesorina ireo lalantsara fitsangatsanganana UK